E-commerce: miroborobo ny varotra elektronika | NewsMada
E-commerce: miroborobo ny varotra elektronika
Ampiasaina tsikelikely eto Madagasikara ny fifampivarotana amin’ny fampiasana ny teknolojian’ny informatika (Tics), antsoina hoe e-varotra (e-commerce). Fomba iray manamora ny fifampivarotana an-davitra. Ampitain-davitra ny fifampivarotana sy ny fifanakalozam-bola, tsy voatery mihaona mivantana intsony ny mpivarotra sy ny mpividy ary azo ampiasaina amin’ny varotra eto an-toerana sy any ivelany ny varotra elektronika.
Manohana ny fampiroboroboana azy ny Vaomiera filamatra misahana ny fampiroboroboana ny varotra elektronika (CPDCE), ny Cnuced ary ny Antenimieran’ny varotra sy ny indostria Antananarivo (CCIA).
Mila vahana ny lafiny fandoavam-bola
Atao eto Madagasikara, ankehitriny, ny tombana, izay maharitra herinandro. Nambaran-dRazafintsalama Gil, tompon’andraikitra ao amin’ny Cnuced, fa anisan’ny zava-bita eto Madagasikara ny famoahana ny lalàna mifehy ny e-varotra, ny taona 2013. Mandeha tsikelikely koa ny dingana samihafa atao mikasika ny fomba fandoavam-bola satria anisan’ny olana mila vahana ny lafiny fandraisana ny vola. Hisy ny fotoana hifampidinihana amin’ireo banky eto an-toerana amin’ny fanatanterahana azy.
Manampy azy ireo hamolavolana ny varotra elektronika ny Cnuced. Miisa fito ny sehatra lehibe notombanana natao tany amin’ireo firenena an-dalam-pandrosoana (PMA), toa an’i Cambodge, i Bhoutan, i Samoa, i Nepal, i Myanmar, i Liberia, i Laos. Jerena ny sakana ary iaraha-midinika amin’ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina hamahana ny olana sy hamaritana ny laharam-pahamehana.
Miisa fito ny sehatra dinihina ny lafiny fotodrafitrasa sy ny sampan’asa mifandraika amin’ny Tics, ny fotodrafitrasa misehatra amin’ny varotra, ny fandoavam-bola, ny lalàna sy ny fepetra mifehy ny e-varotra, ny fanamafisana ny fahaiza-manao sy ny fahazoana famatsiam-bola amin’ity sehatra ity.
Hisy koa fivoriana manokana miompana amin’ny sehatra manan-danja amin’ny varotra elektronika, toy ny fizahantany, ohatra. Handray anjara amin’izany ny mpisehatra eto an-toerana sy ny vahiny miaraka amin’ny tompon’andraiki-panjakana sy ny mpiara-miombon’antoka samihafa.